Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways waxay ballaarisay heshiiska codeshare ee shirkadda Oman Air
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Cumaan • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways waxay sii waddaa inay balaariso faylalka ay ka koobantahay iskaashi istiraatiijiyadeed oo caalami ah adoo la saxiixanaya heshiis balaadhinta codeshare Cumaan Air taas oo sare u qaadi doonta isku xirnaanta isla markaana siin doonta fursado safarro ah oo aad u jilicsan macaamiisha shirkadda diyaaradaha. Heshiiska balaadhinta ee koodhka ayaa ah talaabada ugu horeysa ee lagu sii xoojinayo iskaashiga istiraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada shirkadood ee markii ugu horeysay bilaabay 2000. Iibinta meelaha kale ee dheeriga ah waxay bilaaban doonaan sanadka 2021.
Madaxa shirkadda Qatar Airways Group mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan sii ballaarinno wada-shaqeynta naga dhexeysa koodh-qeybsiga shirkadda Oman Air, oo ka mid ah shirkadaha duulimaadka ee gobolka Khaliijka. Hadda in ka badan sidii hore, waxaa muhiim ah in la xoojiyo iskaashiga istiraatiijiyadeed ee guud ahaan warshadaha si loo hagaajiyo howlaheena loona siiyo isku xirnaan aan kala go 'lahayn boqolaal meelood oo adduunka oo dhan ah loogu talagalay rakaabkeena. Laga soo bilaabo 2000, labada diyaaradoodba waxay arkeen faa'iidooyinka iskaashiga ganacsi keenay, iyagoo siinaya rakaabkeenna adeeg aan lala tartami karin iyo dabacsanaan badan oo ay ku safri karaan markay doonaan. Waxaan rajeynayaa inaan sii xoojiyo iskaashiga ganacsi ee aan la leenahay Cumaan Air si aan u siino xitaa faa'iidooyin dheeri ah macaamiisheena. ”
Madaxa Fulinta ee Cumaan Air, Mudane Cabdulcasiis Al Raisi, ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay in aan ballaarinno iskaashiga ganacsi ee aan la leenahay Qatar Airways, kaas oo qaabeyn doona duulimaadyada tamashlaha ee ka socda adduunka oo dhan si ay ugu raaxeystaan ​​dhaqanka Cumaan, bilic qurxoon iyo soo dhaweyn, iyo fududeynta safarka. kuwa ku booqda Saldanada Cumaan fursado ganacsi oo aad u koraysa oo dhaqso u leh oo ku baahsan qaybo kala duwan. Ballaarinta heshiiskeenna koodh-wadaag waa tallaabada ugu horreysa, waxaana rajeyneynaa inaan la shaqeyno Qatar Airways si aan u sii xoojino iskaashigeenna istiraatiijiyadeed si kor loogu qaado khibradda ganacsi iyo tamashleynta macaamiisheenna Cumaan iyo adduunka oo dhan. ”
Kordhinta koodh-qaybsiga ayaa si weyn u kordhin doonta tirada meelaha ay heli karaan rakaabka Oman Air min seddex ilaa 65 * shabakadda Qatar Airways ee guud ahaan Afrika, Ameerika, Aasiya Baasifigga, Yurub, Hindiya, iyo Bariga Dhexe. Rakaabka Qatar Airways ayaa sidoo kale ka faa'iideysan doona isku xirnaan dheeri ah, iyadoo awood u leh inay ka goostaan ​​safarka lix meelood oo dheeri ah oo ku teedsan Afrika iyo Aasiya shabakadda Oman Air. Labada shirkadoodba waxay sidoo kale baari doonaan dhowr ganacsi iyo hawlgallo wadajir ah oo ay ku xoojinayaan iskaashigooda.
Maalgashiga istiraatiijiga ah ee Qatar Airways ay ku sameysay dhowr diyaaradood oo shidaal wax ku ool ah, oo matoorro mataano ah, oo ay ku jiraan kuwa ugu waaweyn ee diyaaradaha Airbus A350, ayaa u suuragelisay inay sii wadato duulimaadkeeda inta lagu jiro xiisaddan oo ay si fiican u dhigto si ay u horseedo soo kabashada joogtada ah ee socdaalka caalamiga ah Diyaaraddu waxay dhowaan qaadatay seddex diyaaradood oo casri ah Airbus A350-1000, iyadoo kordhisay wadarta guud ee A350 ilaa 52 iyadoo celcelis ahaan da'da ay tahay kaliya 2.6 sano. Saamaynta COVID-19 ee baahida safarka awgeed, waxay shirkaddu hakisay raxankeedii Airbus A380s maaddaama deegaan ahaan aan qiil loo heli karin inay ku shaqeyso diyaarad noocaan oo kale ah oo afar engine leh suuqa hadda jira. Qatar Airways ayaa sidoo kale dhawaan soo bandhigtay barnaamij cusub oo rakaabka u suurta gelinaya inay si iskood ah u dheelitiraan qiiqa kaarboonka la xiriira safarkooda ee goobta ballansashada.
Shirkada duulimaadka ee Qatar ayaa sii waday dib u dhiska shabakadeeda, taas oo hada taagan in ka badan 110 goobood iyada oo qorshuhu yahay in lagu kordhiyo 129 dhamaadka bisha Maarso 2021. by Abaalmarinta Duulimaadyada Adduunka ee 2019, oo ay maamusho Skytrax. Waxaa sidoo kale loo magacaabay 'Duulimaadka ugu Fiican Bariga Dhexe', 'Fasalka ugu Fiican Ganacsiga Adduunka', iyo 'Kursiga Fasalka ugu Fiican ee Ganacsiga', iyada oo lagu aqoonsanayo waayo-aragnimadeeda heerka fasalka Ganacsiga, Qsuite. Qaab dhismeedka kursiga 'Qsuite' waa qaabeyn 1-2-1 ah, oo rakaabka siisa alaabada Ganacsi ee ugu ballaaran, gaar ahaaneed, raaxo leh iyo bulsho fog ee cirka. Waa diyaaradda kaliya ee la siiyay abaalmarinta 'Skytrax Airline of the Year', oo loo aqoonsan yahay inay tahay meesha ugu sareysa ee shirkadaha diyaaradaha, shan jeer.